‘गरिबले मुद्दा जित्दैनन् रे, हो श्रीमान ?’-NepalKanoon.com
‘गरिबले मुद्दा जित्दैनन् रे, हो श्रीमान ?’
डोटी: सामान्यतया सर्वसाधारण न्यायालय छिर्न असजिलो महशुस गर्छन्। न्यायालयमा मुद्दामामिला परेको मान्छे मात्रै जान्छन भन्ने साधारण बुझाइ छ । न्यायाधीहसँग प्रत्यक्ष कुराकानी गर्नु त, परको कुरा।
न्यायाधीशसँग कसरी कुरा गर्ने ? धेरै सर्वसाधारण अन्यौलमै हुन्छन् । कतै मानहानी हुने त होइन? भन्ने समेत मनमा डर हुन्छ । यसकारण अदालत, अदालती कामकाज, न्यायिक प्रक्रिया तथा कानुनी प्रावधानका विषयमा मनमा उब्जिने जिज्ञासा मनमै दबाएर बस्छन्।
तर, पछिल्लो एक वर्षयता देशभरकै अदालतहरुले सर्वसाधारणको यस्तो जिज्ञासा गाउँघरमै पुगेर मेटाउन थालिएको छ। न्यायपालिकाको तेस्रो रणनैतिक योजना अनुसार ‘न्यायिक सम्बाद’ कार्यक्रम मार्फत न्यायाधीश नै सर्वसाधारण माझ पुगेर यस्ता जिज्ञासा मेटाउन थालेका हुन्। जसमा सर्वसाधारणहरुले न्यायाधीशसँग साधारण शैलीमा अदालतका कामकारबाही, अदालती प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया, तथा कानुनी प्राबधानका बिषयमा जानकारी लिने अवसर प्राप्त गर्दछन् ।
यस्तै अवसर शुक्रबार प्राप्त गरे दिपायलबासीले । पुनरावेदन अदालत दिपायलले दिपायलस्थित दिल्पेश्वर उच्च माध्यामिक बिद्यालयमा न्यायिक सम्बाद कार्यक्रमको आयोजना गरेपछि दिपायलबासीले यस्तो अवसर प्राप्त गरेका हुन्।
मौकाको फाइदा उठाउदै दिपायलबासीले मुुख्य न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा न्यायाधीशद्वाय हिमालयराज पाठक र नरबहादुर शाहीमार्फत आफ्ना जिज्ञासा समाधान गरे । सो अबसरमा अदालतका विषयमा समाजमा रहेको धारणा पोख्दै सर्वसाधारणहरुले बास्तबिकतासमेत जान्ने मौका पाए । ‘हाम्रो समुदायमा त मुद्दा प¥यो की पैसा चाहिन्छ भन्ने धारणा छ,’ अदालती प्रक्रिया खर्चिलो हुन्छ भन्ने सुनेको बताउँदै दिपायलका राम बहादुर भण्डारीले भने, ‘पैसा नभई मुद्दा जितिँदैन । त्यसैले गरिबले कहिल्यै मुद्दा जित्न सक्दैन रे, हो र श्रीमान ?’ वकिल बिना मुद्दा लड्न सकिन्न भन्ने धारणा रहेको उनले बताए । ‘वकिलले पैसा नलिई काम गर्देनन् रे, अनि पैसा नहुनेले कसरी मुद्दा जित्लान र,’ उनले आफ्नो जिज्ञासा थपे ।
अदालतभित्र भ्रष्टाचार हुन्छ, भन्ने सुनिएकोमा कत्तिको सत्यता छ ? भनी अर्का सहभागी स्थानीय गणेश पनेरुले जिज्ञासा राखे । उनले थप जिज्ञासा राख्दै भने, ‘पैसा खर्च गर्नेका पक्षमा फैसला हुने भए गरिबले कसरी न्याय पाउलान र ?’ वकिलले चर्को पैसा लिँदा गरिबलाई मुद्दा लड्न कठिनाई भैरहेको अर्का सहभागी बिष्णुबहादुर बोगटीले जिज्ञासा राखे। ‘वकिलले भनेअनुसार पैसा नपाए मुद्दालाई कमजोर पारिदिन्छन रे, अनि गरिबले कसरी मुद्दा जित्लान र ?’ यसको कुनै बिकल्प छ की ? भनेर उनले थप जिज्ञासा राखे ।
शिक्षिका हरिप्रिया शाहीले महिलाले समुदायमा सानाठुला विभेद खेपिरहनु परेको बताउँदै कानुनी उपचार झण्झटीलो भएकाले सहेर बसेको बताइन । यसको कानुनी उपचारका विषयमा जिज्ञासा राख्दै अगाडि भनिन्,’धेरैजसो मुद्दा अदालतसम्म पुग्दा कमजो समेत पारिन्छन, यसो हुन नदिन के गर्नुपर्ला?’ कार्यक्रममा सहभागी अन्य सर्वसाधारणले अदालती संरचना, अदालती कामकारबाही, न्यायिक प्रक्रिया, कानुनी व्यवस्था तथा मुद्दाका प्रकारका विषयमा आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए।
सहभागीबाट उठेका जिज्ञासाहरुलाई मुख्य न्यायाधीश कार्कीले उत्तर दिएका थिए। गरिबलाई न्याय पाइने कुरामा उनले वकिल राख्न नसक्नेका लागि अदालतले वबैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिदिएको जानकारी दिए । ‘गरिब बिपन्न जसले आफ्नो पक्षमा बहस गर्न सक्दैन उसका लागि प्रत्येक अदालतमा एक÷एक जना बैतनिक वकिलको व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले जिज्ञासाको उत्तर दिंदै भने,’बैतनिक वकिलले बिना शुल्क मुद्दाको बहस गरिदिन्छन, जो अदालतबाटै तलब लिन्छन ।’ न्याय पाउनु सबैको हक रहेको उनले बताए ।
भ्रष्टाचारको बारेको जिज्ञासाको उत्तर दिदै मुख्य न्यायाधीश कार्कीले यो छैन भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, ‘यो गम्भीर रोग हो, यसलाई राज्यले आफ्नो ठाउँबाट रोक्नुपर्छ हामीले आफनो ठाउँबाट।’ महिलामाथिको विभेद अन्त्यका लागि सरकारले भरपुर कानुनी ब्यबस्था गरेको उनले बताए । ‘विभेद अन्त्यका लागि अहिले धेरै कानुनी ब्यवस्था छन,’ उनले भने,’अहिले जारी भएको संविधानमा पनि मौलिक हकका ३१ वटा धारा छन् जसमा धेरै हक अधिकारहरुको व्यबस्था गरिएको छ । ती कार्यान्वयनको पाटो भने हेर्न बाँकी छ ।’ अन्य जिज्ञासाहरुको पनि सोही अनुसार उनले उत्तर दिएका थिए ।
– नागरिक न्यूज
पर्यटन ब्यवसायको क्षेत्रमा कार्यरत कानून ब्यवसायीहरुको संस्था टुरिजम लयर्स फोरम नेपालले नेपालको कर प्रणाली, कानून र पर्यटन ब्यवसाय बिषयक एक दिने अन्तरकृया कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । कर्यक्रममा बौद्ध, सिनामंगल, गौसाला तथा एयरपोर्ट क्षेत्रमा...